Funda ngeMbali yoLondolozo lwaBomi Candy
Ngomnyaka we-1912, umenzi weekothokothi uClarence Crane (eCleveland, eOhio) wasungula i-Life Savers njenge "candy ehlobo" eyayinokumelana nokushisa okulungileyo kunotrolethi .
Ekubeni i-mints ibonakala njengabagcini bempilo yobuncinci, wababiza ngokuba ngabaSindisi boBomi. I-Crane yayingenayo indawo okanye imishini ukuba ibenze ngoko ivumelwano kunye nomenzi weepilisi ukunyusa ama-mints ukuba abe ngumbono.
Emva kokubhalisa uphawu lokuthengisa, ngo-1913, iCrane yathengisa amalungelo kwi-peppermint candy ku-Edward Noble waseNew York nge $ 2,900.
I-Noble iqalile inkampani yakhe ye-candy, idala i-til-foil wrappers ukuze igcine i- mints ifumanekile , endaweni yee-rollboard. I-Pep-O-Mint yayiyi-flavour yokuqala ye-Life Saver. Ukususela ngoko, iifrikansi ezahlukeneyo zoLondolozo loBomi ziye zaveliswa. Ukuqala kwe-flavour-five kuqala ngo-1935.
Inkqubo yokuqhoboza i-ton-foil yagqitywa ngesandla kuze kube ngowe-1919 xa umatshini waphuhliswa ngumzalwana kaEdward Noble, uRobert Peckham Noble, ukuhlaziya inkqubo. URobert wayengumjineli oqeqeshwe nge-Purdue. Wathatha umboniso womntakwabo omncinci kwaye wakha waza wakha izakhiwo zokuvelisa ezifunekayo ukwandisa inkampani. Isityalo sokuphambili se-Life Savers sasePort Chester, eNew York. URobert uholele inkampani njengegosa layo elilawulayo eliphambili kunye nomnini-sabelo-mali oyimimandla engaphezulu kweminyaka engama-40, de kube yithengisa inkampani ngasekupheleni kweminyaka ye-1950.
Ngomnyaka ka-1919, ezinye izibhabhane ezithandathu (i-Wint-O-Green, i-Cl-O-ve, i-Lic-O-I-Rice, i-Cin-O-Mon, i-V-O-I-Let, ne-Choc-O-Late) yayidalwe, kwaye ezi yahlala i-flavour standard ukuya ngasekupheleni kwee-1920.
Ngowe-1920, i-flavour entsha ebizwa ngokuba yi-Malt-O-Milk yaziswa. Le lavisi ayifumanekanga kakuhle kuluntu kwaye yavalwa emva kweminyaka embalwa nje. Ngomnyaka we-1925, i-tinfoil yatshintshwa indawo ye-aluminium foil.
Ngowe-1921, inkampani yaqalisa ukuvelisa iziqhamo eziqinileyo. Ngowe-1925, iteknoloji yaphucula ukuvumela umngxuma phakathi kweFruity Life Saver.
Ezi zenziwa njenge "iziqhamo ezihlayo kunye nomngxuma" kwaye zafika kwiziqhamo ezintathu, zifakwe kwiiprogram ezihlukeneyo. Ezi ziqulatho ezintsha zaza zaziwa ngokubanzi kuluntu. Ezinye iifutha zaziswa ngokukhawuleza.
Ngomnyaka we-1935, i-classic "I-Flavour-Five" yaqaliswa, ihambisa i-flavour five (ezahlukeneyo, i-lime, i-orange, i-cherry kunye ne-lemon). Uluhlu lwentlambo aluzange lutshintshe malunga neminyaka engama-70, de kube ngowama-2003, xa i-flavour ezintathu ithathelwa endaweni e-United States, eyenza iipinapple, i-cherry, i-raspberry, i-watermelon kunye ne-blackberry. Nangona kunjalo, i-orange yabuyiswa kwakhona kwaye i-blackberry yahlulwa. Umgca wokuqala we-five flavour is yethengiswa eCanada.
Ngowe-1981, uNabisco Brands Inc. wathola ubomi boBomi. UNabisco wavelisa ukunambitheka kwe-cinnamon entsha ("I-Hot Cin-O-Mon") njenge-candy drop drop candy. Ngo-2004, ishishini le-US Life Savers lafunyanwa nguWrigley. UWrigley uqalise i-flavour ezimbini ezintsha (okokuqala ngqa kwiminyaka engaphezu kwama-60) ngo-2006: i-Orange Mint kunye ne-Sweet Mint. Baphinde baphinde bavuselele amanye amavulantshi amantombazana asekuqaleni (njenge-Wint-O-Green).
Imveliso yokuSindisa iMpilo yayiseHolland, eMichigan, kwaze kwaba ngo-2002 xa ishukunyiselwa eMontreal, e-Québec, eCanada.
Imbali kunye neMvelaphi yePhepha yakho eyintandokazi
Ziziphi ii-Ellipsis Points?
Oko Kufuneka Ukwazi Ukudweba I-Canvas
Isitatimenti somntu (incoko)
I-Biography yeGeronimo: iNkokheli yaseNdiya kunye neNkokeli
Yintoni ebalulekileyo ye "Hadithi" yamaSulumane?
Iingxelo zeBali zeBhayibhile (Index)
Izihloko ezi-5 ezinzima ukuxoxa ngeNtsapho yakho